Nagu saabsan - Haidari Technology Beauty Co., Ltd.
Kusoo dhawow Nala Xiriir!
Waxaa la aasaasay 2014, Haidari Beauty Technology (Beijing) Co., Ltd waa soo saare xirfadle ah oo diiradda saaraya cilmi baarista iyo soo saarida qalabka laser-ka Caafimaadka iyo bilicsanaanta iyo mashiinka warshadaha ee Shiinaha.
Haidari Beauty inta badan waxay siisaa leysarka jajabka ah ee loo yaqaan 'CO2 laser' (siilka iyo daaweynta waalka, dib u habeynta maqaarka, dib u soo cusbooneysiinta maqaarka), laser Picosecond, Erbium laser (1550nm, 2940nm), mashiinka khafiifinta laser, 808nm mashiinka laser saarista, mashiinka calaamadeynta, iwm.
Haidari Beauty sidoo kale waxay bixisaa adeegyo OEM iyo ODM oo ku saleysan rabitaanka macaamiisha.
Maaddaama ay tahay Haidari Beauty oo qayb ka ah ganacsigaaga, waxaad ku dhiirrigelin kartaa oo aad ku dhiirrigelin kartaa macaamiishaada inay sare u qaadaan quruxdooda ayna horumariyaan tayada noloshooda iyagoo leh badbaado, saadaalin iyo daaweyn wax ku ool ah.
Tan iyo aasaaskeedii, shirkaddu waxay ku dhaqmaysay afarta mabaadi'da ee "tayada ugu horreysa", "macaamilka ugu horreeya", "adeegga ugu horreeya" iyo "magaca ugu horreeya". Waxaan rajeyneynaa joogitaankaaga iyo wada shaqeyntaada, iyo inaan dadaal wadajir ah u galno sababta laydhka ee warshadaha qaranka Shiinaha.
Shirkaddu waxay leedahay koox heer sare ah oo elektiroonig ah, muraayadaha indhaha iyo saxnaanta cilmi-baarista iyo shaqaalaha horumarinta, oo leh qalabka wax lagu cabbiro ee heer caalami ah, hagaajinta habka wax-soo-saarka wax-ku-oolka ah iyo nidaamka maaraynta tayada adag, si loo hubiyo tayada alaabtayada.
Shirkaddu waxay ku takhasustay soo saarista qalab wax-qabad sarreeya, xoog farsamo oo xoog leh, awood horumarineed oo xoog leh, adeegyo farsamo oo wanaagsan